कुन सेलिब्रेटीले कसरी मनाउँदै छन् तिहार ? - Dainik Online Dainik Online
प्रकाशित मिति : १९ कार्तिक २०७८, शुक्रबार ४ : ३५
काठमाडौं । नेपालीको दोस्रो ठूलो पर्व तिहार सुरु भइसकेको छ । अघिल्लो वर्षको भन्दा यसपालि परिस्थिति अलि सहज भएकाले जनमानसमा उत्साह पलाएको छ ।आमसर्वसाधारणझँै फिल्म तथा संगीत क्षेत्रका सेलिब्रेटीहरू पनि विशेष तवरले तिहार मनाउने गर्दछन् ।
यसपालिको तिहार कुन सेलिब्रेटीले कसरी मनाउँदैछन् ? उनीहरूको योजना के छन् त ? यसबारेमा न्युज कारखानाका लक्ष्मण सुवेदीले तयार पारेको एक रिपोर्टः